I-Hofstra University: Izikolo ze-SAT, Imilinganiselo ye-Acceptance & More
I-Hofstra University, ngenani lokumkela lika-62%, isikolo esinokufikelela. Abafundi abaneempawu ezifanelekileyo kunye namanqaku okuvavanya banokutshintshwa okulungileyo kokungeniswa. Njengengxenye yenkqubo yesicelo, abafundi abaza ku funeka ba ngenise isicelo (mhlawumbi ngewebhusayithi yesikolo, okanye ngeSicelo esiQheleleyo), imibhalo yesikolo esiphakamileyo, kunye nesampula yokubhala. I-Hofstra yiziko lokuzikhethela; Abafaki zicelo akudingeki ukuba bangenise izikolo ze-SAT okanye ze-ACT njengenxalenye yesicelo.
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, qiniseka ukutyelela iwebhusayithi ye-yesikolo, qhagamshelana ne-ofisi yokuvuma, okanye u tyelele i-campus kumntu.
I-Hofstra University Ukwamkelwa kweNyuvesi: 62%
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph ye-Hofstra Admissions
SAT Ukubhala : - /
Hofstra University I nkcazelo:
I-campus yase-Hofstra ye-ekra engama-240 itholakala eHemptstead, e-Long Island, ekufikelelekeni kuwo wonke amathuba kwiSixeko saseNew York. Iyunivesithi inomlinganiselo we-14 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule bobukhulu kunye nobukhulu bendawo yobukhulu be-22. Ubomi bekampus busebenzayo, kwaye iHofstra inokuziqhayisa ngamaqela angama-170 kunye nemibutho yabafundi kuquka inkqubo yesiGrike esebenzayo. Ushishino luyaziwa kakhulu phakathi kwegraduate, kodwa amandla e-Hofstra University kwimfundo yobuninzi kunye nesayensi yafumana isikolo isahluko sePhi Beta Kappa .
Ngaphambili kwezemidlalo, i-Hofstra Pride ikhuphisana kwiCandelo le-NCAA I- Colonial Athletic Association . Imidlalo evelele ibandakanya ibhola yebhoksi, ibhola kunye nensimu, ibhola lebhola, i-lacrosse kunye nehokkey yentsimi.
Ubhaliso lwabonke: 11,145
94% Ixesha elipheleleyo
Isifundo kunye neMali: $ 42,160
Igumbi neBhodi: $ 13,800
Ezinye iindleko: $ 3,224
Ixabiso lilonke: $ 60,184
I-Hofstra Yunivesithi Yonyango (2015 - 16):
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 97%
Izibonelelo: $ 23,185
Imali: $ 10,664
I-Popular Majors: I- Accounting, Ulawulo lwezeShishini, Izifundo zoNxibelelwano, isiNgesi, iMali, iMbali, ukuThengisa, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology
Ukugqweswa iziqu, ukugcinwa kunye nokuThuthwa kweRhafu:
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 82%
Ukutshintshwa-Ixabiso lethu: 27%
Ireyithi ye-4 yoNyaka yokuQeqesha: 53%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 64%
Ezemidlalo zaMadoda: Ibhola lebhoksi, i-Lacrosse, ukulwa, ibhola lebhola, i-Baseball, igalofu, i-tennis, ilizwe eliphambeneyo, i-Track and Field
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Lacrosse, i-Volleyball, iBhola lebhola, iHockey yeHlabathi, iNgcahla, iThenti, iSoftball, I-Track and Field, Country Cross
Ukuba uthanda i-Hofstra University, Unokuthi uthanda ezi zikolo:
Idilesi ye-Seton Hall: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Hofstra kunye nesicelo esiqhelekileyo
I-Hofstra University isebenzisa isicelo esiqhelekileyo . La manqaku angakunceda ukukukhokela:
Iimvavanyo zesicatshulwa eziqhelekileyo kunye neesampuli
Iingcebiso ezimfutshane zeempendulo kunye neesampuli
Iingcebiso zesicatshulwa esongezelelweyo kunye neesampuli
I-Princeton University Admissions
I-Fort Hays State University Admissions
I-College College Admissions Information
Adma College Admissions
I-SAT izikolo zokungeniswa kwiiyunivesithi zaseburhulumenteni eFlorida
I-Tennessee State University Admissions
Indlela yokudlala iya kuba yi-Linebacker
20 Izilwanyana ezintle ezicinga ukuba ngabantu
Kuthetha ntoni "eliphakathi"?
Imbali ka Nemesis
I-CHEERS: Uqokelelo lwababathandayo be-Cheerleader
I-California State Polytechnic University-Pomona Admissions
Iingoma eziphezulu zeR & B / Soul ze-2012
3 I-Advent Colors ephezulu enePhatha
Ukuguqulwa koBuntu Bombongo
Izilwanyana ezifihliweyo ngaphantsi kweePompo zePompo zeGesi ziyiNkalo yeDolophu